Xaaf oo Xilkii laga Xayuubiyay -
In dhowaale waxaa xiisad siyaasadeed ka taagneed Madaxda Maamulka Galmudug dhaxdooda ka dib markii Axmed Ducaale Geele Xaaf uu soo saaray War saxaafadeed uu Maamulkiisa Ku taageeray isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta arinta Khilaafka Wadaddamad Khaliijka.
Axmed Ducaale ayaa dhowaan waxaa uu ka soo laabtay isutaga Imaaraadka Carabta waxaana uu gaaray markii danbe Cadaado. Markii uu Cadaado uu gaaray waxaa Xaaf uu xabsi Guriga ka dhigay Gudoomiyaha Baarlamanka Galmudug Calali Gacal Casir,Gudoomiye Ku xigeenka Baarlamanka labaad Maxamad Maalin iyo Madaxweyne Ku xigeenka Maxamad Xaashi Carabay ka dib markii ay ka soo hor jeesteen War saxaafadeedka.
Galabta ayaa Hoyeel Ku yaala Cadaado waxaa Ku shiray inta badan Xubnaha Baarlamanka Maamulka Galmudug waxaana ujeedka uu ahaa in Xilka laga qaado Axmed Ducaale Geele Xaaf waxaa kulanka Fadhiyay Xildhibaan Gaarayay 55 Xildhibaan waxaa ogolaatay in Xaaf Xilka laga Xayuubiyo 52 Xildhibaan, halka 2 Xildhibaan ay diideen, hal Xildhibaanada uu ka aamusay.
Dhinaca kale waxaa go’aanka Baarlamanka Galmudug taageeray Gudoomiyaha Baarlamanka Galmudug Cali Gacal Casir oo asagoo xabsi Guri ku jira soo saaray war saxaafadeed.
Geesta kale waxaa arimkan diiday oo ka hor yimid Xildhibaano tiro yar oo Xaaf taageersan.
Waxaa hogaanka xildhibaanada taageersan Xaaf u haya Gudoomiye ku xigeenka kowaad Xareed Cali Xareed.
Baarlamanka Galmudug ayaa tiradooda waxay tahay 89 Xildhibaan Dastuuriyan Xaaf ushan way Ku dhacday sidii saaxiibkiisii Cabdi Karin Xuseen Guuleed oo kale.
Related Items:DEG DEG:Gudigii Dooran lahaa Madaxweynaha Hir-shabeelle oo si rasmi ah Loogu Dhawaaqay Maanta, DEG-DEG:Xaaf oo Xilkii laga Xayuubiyay, Featured
Madaxweyne Xaaf oo xaalada adag markale kala kulmay baarlamanka Galmudug